Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya eziya eLondon Heathrow zisuka eCalgary eWestJet ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Iinqwelomoya eziya eLondon Heathrow zisuka eCalgary eWestJet ngoku.
Indlela entsha ye-WestJet yokukhawulezisa ukubuyiswa koqoqosho lwase-Alberta kwaye iqhube umtsalane wotyalo-mali kunye noqhagamshelo kwindawo yehlabathi e-Heathrow yaseLondon.
Indlela entsha engayekiyo ye-WestJet ukusuka kwi-YYC ukuya eLondon Heathrow, eyona ndawo iphithizelayo kwisikhululo seenqwelomoya eYurophu, yamkelwa ngabo bajonge ukufikelela kwiziko lehlabathi lezezimali neloshishino lokuqala kunye nabo balangazelela uqhagamshelwano oluthe ngqo ukuze bahlole inkcubeko yaseLondon neempawu zomhlaba.
IHeathrow yindawo ebalulekileyo yofikelelo kushishino nabakhenkethi bezolonwabo kwaye iya kuba luncedo olukhulu kubatyali-mali nakubakhenkethi.
Ukufikelela emoyeni ngundoqo ekuvuseleleni uqoqosho lwase-Alberta kunye nokukhula koshishino lokhenketho.
I-WestJet namhlanje ibhengeze ukuba izakongeza inkonzo engayekiyo eLondon Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow (LHR) ukuqala ekuqaleni kweNtwasahlobo ka-2022. Njengoko i-WestJet iqhubeka nokwandisa uqhagamshelwano lwehlabathi jikelele ukusuka eNtshona Canada, ukongezwa kwenkonzo engayekiyo phakathi kweCalgary neLondon-Heathrow kubonisa ukuzithemba ekubuyiselweni kwakhona kweshishini kunye nohambo lokuzonwabisa phakathi kweendawo zombini.
"Njengenqwelomoya eneenqwelomoya ezininzi ezisuka eAlberta, esi sisiganeko esibalulekileyo sokubuyisela njengoko sisenza unxibelelwano olutsha phakathi kweCanada kunye nenye yezona ndawo zifunwa kakhulu kwihlabathi," utshilo uJohn Weatherill. I-WestJet IGosa eliyiNtloko lezoRhwebo. "Siyaqhubeka nokomeleza inethiwekhi yethu, sinikezela ngeendlela ezininzi zokushishina kunye nabakhenkethi bezolonwabo kwaye olu tyalo-mali luya kukhawulezisa ukuchacha kweshishini lethu ngelixa siqinisekisa ukuba iNtshona Canada ibuyela umva kubhubhane ngakumbi kunangaphambili."
Ngokongezwa kwe Heathrow kuthungelwano lweWestJet kule ntlakohlaza, iWestJet iya kuqhagamshela iCalgary kwiindawo ezingama-77 ezingayekiyo unyaka wonke. I-WestJet iya kuqhubeka nokubonelela ngeenqwelomoya ezingamisiyo phakathi kweCalgary, Vancouver, Toronto kunye neHalifax ukuya eLondon, eGatwick.
Iinkcukacha ezongezelelweyo womnatha uhambo phakathi Calgary kunye ILondon-Heathrow kubandakanywa ukuphindaphindwa, ixesha kunye namaxabiso entshayelelo aya kufumaneka, kwaye ayathengiswa, kwiiveki ezizayo.